Nọvemba 2020 - Blog Blog
Inwe mmalite mmalite na Windows 10? Ụzọ dị mfe iji dozie okwu a
Inwe mmalite mmalite na Windows 10? Ụzọ dị mfe iji dozie nsogbu a. Inwe mmalite mmalite na Windows 10: Ọ bụrụ na ị nọ ebe ahụ, mgbe ahụ ị kwesịrị ịma otú ọ ga -esi akụda mmụọ mgbe kọmputa gị na -egbu oge ngwa ngwa ...
Otu esi emechi ma ọ bụ hie ụra kọmpụta gị & mara nke kacha mma
Otu esi emechi ma ọ bụ hie ụra kọmpụta gị & mara nke kacha mma. Otu esi emechi ma ọ bụ hie kọmputa gị: Mgbe anyị na -eji kọmpụta, oge ụfọdụ, ọ ga -adị anyị mkpa ịkwụsị ya, ma ọ bụ site n'itinye ya na ...
Onye njikwa Xbox One anaghị arụ ọrụ? Ụzọ dị mfe iji dozie nsogbu & mezie
Onye njikwa Xbox One anaghị arụ ọrụ? Ụzọ dị mfe iji dozie nsogbu & mezie. Onye njikwa Xbox One anaghị arụ ọrụ: Ọ nwere ike na -ewute gị nke ukwuu mgbe ị dị njikere maka egwuregwu mana onye njikwa egwuregwu anaghị arụ ọrụ ma dịkwa njikere iji ya. Na nke a ...
By Onye Kraịst TMLT November 11, 2020 Technology 0 Comments
Etu ị ga -esi nwetaghachi foto ehichapụ WhatsApp na iPhone & gam akporo. Ị maara na ị nwere ike weghachite foto ehichapụ na Whatsapp gị? Edemede a kpuchiri ụzọ kachasị mfe na ngwa ngwa ị nwere ike weghachite ha. WhatsApp bụ akụkụ dị mkpa nke ...
Gburugburu Windows 7 kacha mma ị kwesịrị ịnwale iji
Gburugburu Windows 7 kacha mma ị kwesịrị ịnwale iji. Ị nwetụla mgbe ị ga -eji anya dị iche hazie desktọpụ Windows gị? Ị nwere ike lelee nke a Windows 7 isiokwu ị nwere ike iji. Windows 7 bụ sistemụ arụmọrụ mbụ nke Microsoft…
Mgbasa ozi mmapụta: Etu ị ga-esi kwụsị mgbasa ozi mmapụta na ekwentị gam akporo
Mgbasa ozi mmapụta: Etu ị ga-esi kwụsị mgbasa ozi mmapụta na ekwentị gam akporo. Ị na -enweta mgbasa ozi mgbe niile na ekwentị gam akporo gị ma ị na -eche otu esi akwụsị mgbasa ozi gbapụtara na ihuenyo ụlọ gị? Ọ bụ ezie na gam akporo dị oke mma na nhazi ya, ọ nwekwara ...
Vidiyo vidiyo: mmelite 2020 maka otu esi abawanye Ram vidiyo raara onwe ya nye
Vidiyo vidiyo: mmelite 2020 maka otu esi abawanye Ram vidiyo raara onwe ya nye. Vidiyo vidiyo: Kaadị eserese bụ ihe ngwaike nke sistemụ gị kacha ekpebi ma a ga -emetụta arụmọrụ PC gị niile. Ịhụ mperi ndị metụtara raara onwe ha nye ...
Njikwa ebe nchekwa: Otu esi akwụsị njikwa ebe nchekwa Kwụsị koodu
Njikwa ebe nchekwa: Otu esi akwụsị njikwa ebe nchekwa Kwụsị koodu. Njikwa ebe nchekwa: N'adịghị ka ụdị ochie nke Windows, Windows 10 kwụsiri ike. Ogologo oge gara aga bụ njehie ochie nke Ọnwụ (BSOD), mana nke ahụ apụtaghị na ha agaala nke ọma ....
Kedu ihe bụ iwu Google Home & kedu egwuregwu ị nwere ike iji ya egwu?
By Victoria Akpan TMLT November 11, 2020 Mbido, Housing, Technology 0 Comments
Kedu ihe bụ iwu ụlọ Google & kedu egwuregwu ị nwere ike iji ya rụọ? Kedu ihe bụ iwu Google Home? Google Home na -ejikọ ịdị mma nke onye enyemaka Google na ngwaọrụ ụlọ mara mma, na -emepe ụwa niile nke ihe ị nwere ike iji site na iji ...
iMessage anaghị arụ ọrụ? Nzọụkwụ kachasị ọhụrụ & dị mfe iji dozie nsogbu & mezie ya
iMessage anaghị arụ ọrụ? Nzọụkwụ kachasị ọhụrụ & dị mfe iji dozie nsogbu & mezie ya. iMessage anaghị arụ ọrụ? Ọ bụrụ na ị na -eji iPhone, Ị ga -achọpụtala na mgbe izipu ozi, ụfọdụ na -egosipụta na -acha anụnụ anụnụ ebe ndị ọzọ na -acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ozi na -acha anụnụ anụnụ na -eji iMessage, ...